कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ? - प्रो-पाठ्शाला
Home अन्य बिषय कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ?
– प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ ।
– कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
– सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ ।
– राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
– सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
– करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।
– भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।
– जसलाइ कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्न पर्ने कर ।
– अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो ।
– आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् ।
– भार र असर बेग्लाबेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।
– कर तिर्ने भार एक पक्षमा र उक्त करको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ ।
– भार हस्तान्तरण हुने कर भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ ।
– वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् ।
– सरकारको महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग,
– स्थायी र वैधानिक प्रकृतिको सेवा,
– स्थायी कर्मचारीहरू र गुणतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित,
– कानुनद्वारा निर्धारित सेवा र सर्तहरू भएको,
– गैरसैनिक वा गैरफौजी सेवा,
– तटस्थ र निष्पक्ष सेवा,
– राजनीतिबाट अलग रहेको सेवा,
– योग्यता प्रणालीमा आधारित,
– निश्चित किसिमको पदसोपान भएको,
– तलब–सुविधाको सुनिश्चितता भएको सेवा ।